Baaq xabad Joojin oo ku aadan Colaada Mudug ka socota | Majliska.org
Baaq Xabad Joojin
Illaahay ayaa mahad dhamaanteed u sugnaatay, Nabadgalyo iyo Naxariisna Nabagiisa (scw) korkiisa ha ahaato.
1- Golaha Imaamyada Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika, wuxuu ugu baaqayaa dhamaan dhinacyada ay u dhaxayso colaada iyo fitnada Gobolka Mudug ka aloosan inay joojiyaan xabada si shuruud la’aan ah.
2- Goluhu wuxuu ugu baaqayaa labada dhinac ee colaadu u dhaxayso xasuusinayaana inay illaahay uga baqaan daadinta dhiiga walaalahooda muslimka ah, arinkaas shareecdu waxay gaysay meel fog, dilida qof muslim ahna, shareecadu waxay ku tilmaantay danbiyada waa waayn ee lagu halaagsamo.
3- Goluhu wuxuu ugu baaqayaa Madaxda labada maamul Galmudug iyo Puntland in illaahay uga baqaan masuuliyadaas saaran, ayna ku dhameeyaan wada hadal khilaafka keenay dagaalkaas macno darada ah. Shacabka Soomaaliyeed uma xiiso qabo dagaal sokeeye, lagamana dhaxlo waxaan ahayn qax/barakac iyo baaba dad iyo duunyaba leh.
4- Goluhu wuxuu soo dhawaynayaa dadaalada nabad raadinta ah ee ay wadaan, Madaxda iyo culummada Soomaaliyeed, wuxuuna ugu baaqayaa inay ka mira dhaliyaan dadaalkaas Islaaxa ah. Isla mar ahaantaasna wuxuu uga mahad celinayaa Madaxda iyo Culummada howshaas ku jirta dadaalkooda.
5- Ugu danbayntii Goluhu wuxuu ugu baaqayaa ummada Soomaaliyeed madax iyo shacaba, gaar ahaam ummada ku dhaqan Gobolka Mudug, inay isugu tagaan sidii loo damin lahaa dabkaas aakhiro iyo aduunba lagu seegayo, ayna xooga saaraan sidii looga mira dhalin lahaa dadaalada socda ee Nabad raadinta ah. Goluhu wuxuu illaahay uga baryayaa guud ahaan ummada Soomaaliyeed iyo kuwa colaadu u dhaxaysoba in illaahay xaqa tuso, kuna hanuuniyo raacidiisa iyo inay ka waan toobaan daadinta dhiiga Muslimka.
Madaxa Fulinta ee Golaha Imaamyada
Soomaaliyeed ee Waqooyiga Ameerika